RASMI: Kooxda Manchester United oo shaacisay lambarka uu u xiran doono daafaceeda cusub ee Harry Maguire – Gool FM
(Manchester) 07 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xaqiijisay lambarka uu u xiran doono Harry Maguire kaddib markii ay adduun dhan 80 milyan oo gini uga soo qaadatay naadiga Leicester City.
26-sano jirkaan ayaa noqday daafaca ugu qaalisan dunida, isagoo rikoorkaas kala wareegay Virgil van Dijk kaddib markii uu dhameystiray ku biiritaankiisa kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford.
Kooxda Man United waxa ay xaqiijisay maanta in Harry Maguire uu u qaadan doono lambarka caanka ah ee 5-aad.
Marcos Rojo ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee xirta maaliyadda lambarka 5-aad ee Manchester United xilli ciyaareedkii 2017-18, yeelkeede waxa uu Rojo u bedeshay lambarka uu jecel yahay ee 16-aad xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, taasoo la micno ah in lambarka uu Maguire qaatay uu iska banaanaa.
Xiddigaha magaca leh ee maaliyadda lambarka 5-aad u soo xirtay Manchester United waayaha Premier league waxaa ka mid ah Laurent Blanc, Ronny Johnsen iyo Rio Ferdinand, iyadoo kabtankii hore ee xulka England Ferdinand uu lambarkaan xirnaa muddo 11 xilli ciyaareed ah.
Dhanka kale Maguire waxa uu maaliyadda lambarka 5-aad u soo xirtay kooxaha Shefield United iyo Hull City ka hor inta uusan lambarka 15-aad u qaadan Leicester City.
Waxaa daafacan ugu qaalisan kubadda cagta adduunka uu lambarka 6-aad u xirnaa xulkiisa qaranka England koobkii Adduunka.
Si kastaba wakiillada ciyaaryahankan Maguire ayaa horay si aan ku talo-gal ahayn u shaaciyey in lambarkaan 5-aad uu ciyaaryahanku kooxda u xiran doonto, balse hadda ayaa warkaas mid run ah ka dhigtay.
Idaacadda Spain ee El Larguero oo shaacisay kooxda Premier League ka dheesha ee qarka u saaran inay dhammaystiro saxiixa Philippe Coutinho